Ndị na -emepụta katapili | Ndị na -eweta caterpilliar China & ụlọ ọrụ
Ngwongwo ihe dị elu Alloy Steel n'akụkụ akụkụ mkpanaka 7Y0357/58 maka Caterpillar E330
Akụkụ akụkụ dị mma nke Alloy Steel n'akụkụ akụkụ ihe mkpuchi 7Y0357/58 maka Caterpillar E330, nke dabara na bolt & nut & washer & spring asher 8T0368 & 8T1583 & 3S1349 & 3B4520. Dochie maka akara ama ama ama Caterpillar. Nwere nkedo na ịkpụzi usoro mmepụta abụọ dị iche iche.
9N4552 nwamba E345 J550 maka Excavator mapụtara Parts Standard Long ịwụ Nha nha.
9N4552 Excavator Spare Parts Standard Long Bucket Tooth maka CAT E345 J550 dabara na bevel na nkwụnye kwụ ọtọ 6i6554 na E345-60, GAP 60MM, 70MM wdg na pin 6Y8558. Standard eze na -eji na -arụ ọrụ ọnọdụ nke contruction na Ngwuputa, Aili factory nwere ụdị mmepụta usoro: nkedo na ibe ya bụrụ.
9N4452 nwamba E330 J460 N'ihi Excavator mapụtara Parts Standard Long ịwụ ibe ya bụrụ Ezé
9N4452 Excavator Spare Parts Standard Long Bucket Forging Tooth maka CAT E330 J460 dabara na bevel na nkwụnye kwụ ọtọ 6i6464 na E330-50, GAP 50MM, 55MM, 60MM wdg na pin 8E0468. Standard eze na -eji na -arụ ọrụ ọnọdụ nke contruction na Ngwuputa, Aili factory nwere ụdị mmepụta usoro: nkedo na ibe ya bụrụ.
9N4352 nwamba E320 J350 N'ihi Excavator mapụtara Parts Standard Long ịwụ ibe ya bụrụ Ezé
9N4352 Excavator Spare Parts Standard Long Bucket Forging Tooth maka CAT E320 J350 dabara na bevel na nkwụnye kwụ ọtọ 3G8354, 6i6354 na E320-40, GAP 40MM, 45MM wdg na pin 8E6358. Standard eze na -eji na -arụ ọrụ ọnọdụ nke contruction na Ngwuputa, Aili factory nwere ụdị mmepụta usoro: nkedo na ibe ya bụrụ.
4T2303RP nwamba E200 J300 Maka Excavator Spare Parts Standard Long Bucket Forging Ezé
4T2303RP Excavator Spare Parts Standard Penetration Bucket Forging Tooth for CAT E200 J300 dabara na bevel na nkwụnye kwụ ọtọ 3G6304, 8E9490 na E200-35, GAP 30MM, 35MM wdg na pin 9J2308. Standard eze na -eji na -arụ ọrụ ọnọdụ nke contruction na Ngwuputa, Aili factory nwere ụdị mmepụta usoro: nkedo na ibe ya bụrụ.
1U3301 nwamba E200 J300 N'ihi Excavator mapụtara Parts Standard Short ịwụ Nkedo Ezé
1U3301 Excavator Spare Parts Standard Penetration Bucket Forging Tooth maka CAT E200 J300 dabara na bevel na nkwụnye kwụ ọtọ 3G6304, 8E9490 na E200-35, GAP 30MM, 35MM wdg na pin 9J2308. Standard eze na -eji na -arụ ọrụ ọnọdụ nke contruction na Ngwuputa, Aili factory nwere ụdị mmepụta usoro: nkedo na ibe ya bụrụ.
1U3302SYL nwamba E200 J300 N'ihi Excavator mapụtara Parts Standard ịwụ Nkedo ezé
1U3302SYL Excavator Spare Parts Standard Penetration Bucket Forging Tooth maka CAT E200 J300 dabara na bevel na nkwụnye kwụ ọtọ 3G6304, 8E9490 na E200-35, GAP 30MM, 35MM wdg na pin 9J2308. Standard eze na -eji na -arụ ọrụ ọnọdụ nke contruction na Ngwuputa, Aili factory nwere ụdị mmepụta usoro: nkedo na ibe ya bụrụ.
123456 Ọzọ> >> Page 1/8